0 AD yakanakisa nzira yemutambo yakafanana neZera reMambo | Linux Vakapindwa muropa
Ndinotenda kuti vazhinji vedu vamwe isu tinofanirwa kurangarira mazita ezera reEmpires, ayo aive yemitambo yakanyanya kushandiswa yenguva yayo uye iyo yaunogona kushandisa maawa kuseri kwekombuta yako kuvaka budiriro yako kuburikidza nemazera.
0 AD haina kunyatsosiyana nekuti inokupa iwe yakafanana mutambo mutambo kusvika Zera reEmpiresi, iro raunogona kuteedzera nguva idzo zano raive simba rako rekutungamira budiriro yako mukukunda.
Kune avo vashandisi vari "vatsva" uye ivo vaisaziva mazita ezera reEmpires ini ndinogona kukuudza zvishoma pamusoro pavo mazita aya ivo vaive chaiwo-enguva zano revhidhiyo mitambo yemakomputa ako ega akagoverwa neMicrosoft Games yeWindows uye Mac OS masisitimu anoshanda, uye Konami yePlayStation 2.
Aya mazita ndiwo seta panguva dzakasiyana dzenguva, mavari zvinoenderana nenguva dzevakundi vane mukurumbira kuburikidza nenguva.
1 Pamusoro 0 AD
2 Maitiro ekuisa 0 AD muLinux?
Pamusoro 0 AD
Kuziva zvishoma iro zano reZera reMambo, tinogona kunzwisisa kurangana kwe 0 AD, sezvo izvi pakutanga zvaizongova mod yeZera reEmpires II, asi zvainge zvisina kudaro, zvinhu zvakachinja uye 0 AD yakatora nzira yayo.
Pakutanga tinofanirwa kuziva izvozvo 0 AD ndeye yemahara uye yakavhurwa sosi mutambo izvo, injini yako yemutambo "Pyrogenesis" Inogoverwa pasi peGPL v2 + rezinesi.
Iyo zvakare inoshandisa yakavhurika sosi maraibhurari senge OpenGL, OpenAL, Boost, SDL, Vorbis, uye wxWidgets. Iyo inotsigira yakavhurika dhata dhata senge COLLADA, XML uye JSON.
0 AD inguva chaiyo zano revhidhiyo mutambo iyo iri kuvandudzwa neMitambo Yemoto Yemoto.
Ndiwo mutambo wehondo dzezvakaitika uye hupfumi hwekare, ichikubvumidza iwe kuti utangezve dzimwe dzeakanyanya ehondo munhoroondo yekare.
Chikamu chekutanga chemutambo chinofukidza iyo nguva kubva 500 BC kusvika 1 AD uye yechipiri kubva 1 AD kusvika 500 AD
Maitiro ekuisa 0 AD muLinux?
0 AD mutambo unozivikanwa kwazvo uyo wakasanganisirwa muzvinyorwa zvezvakawanda zvekugovera kwenguva yakati rebei.
Saka kuiswa kwako hakufanirwe kuda chero chinhu chinowedzera. Isu tinongofanirwa kuvhura terminal pane yedu system uye nekuisa mutambo neinotevera kuraira maererano neLinux kugovera iwe yauri kushandisa.
Naizvozvi, iwe unozokwanisa kutanga kunakidzwa nemutambo pane yako system uye uve nenguva yakanaka yekunakidzwa, nezve izvo zvinodiwa nehurongwa, usanetseke, ivo havana kuwandisa, chero komputa kubva gumi iri makore inogona kumhanyisa mutambo.
Iwe unogona zvakare kuwana pamambure akasiyana mafundo, ruzivo, minda yemizambiringa uye nharaunda dzaunogona kuwana nekugovana zvemukati nezve uyu mutambo mukuru.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » 0 AD mutambo wakasarudzika wemutambo wakafanana neZera reMambo
Francis T akadaro
Muwebhu yekutamba mu linux takasangana neboka revatambi ve 0AD mu linux. Isu tinozvidaidza isu kuti Clan0AD. Kana mumwe munhu achifarira kusaina, vanogona kupfuura https://jugandoenlinux.com/index.php/foro/clan-0ad-jel
pazviteshi zveteregiramu https://telegram.me/jugandoenlinux
kana mumatrix https://matrix.to/#/#clan0ad-jugandoenlinux.com:matrix.org
Pindura kuna Francisco t
Wakanakisa mutambo, super yakakurudzirwa yakafanana ne warzone 2100